Fihetsiketsehana proteinina 3 namboarina hamaritana | Bezzia
Toñy Torres | 17/07/2021 18:00 | zava-pisotro, fanatanjahan-tena
Raha te hampitombo ny hozatra ianao dia tsy maintsy manambatra fanatanjahan-tena amin'ny sakafo manan-karena gliosida sy proteinina. Na dia matetika aza ny fampiasana fanafody fanampiny proteinina, satria izy ireo tena ilaina amin'ny fananganana hozatra. Androany dia azo atao ny mahita vovoka proteinina ho an'ity tanjona ity, na dia azonao atao aza ny mahita azy io amin'ny sakafo.
Ny proteinina dia ampiasaina amin'ity tranga ity hanovana ny tavy ho lasa hozatra, fa noho izany dia ilaina ny manambatra azy amin'ny fanatanjahantena. Izany hoe, ny fanaovana fanampin-tsakafo misy proteinina dia tsy hanao azy samirery, mety hahatonga anao hanana lanja bebe kokoa aza. Noho izany dia tsy maintsy tadidinao fa mety tsara ireo horohoron-tany ireo, raha mbola ampiarahina amin'ny fampihetseham-batana tsara izy ireo, ny filamatra dia ny mitondra azy ireo aorian'ny fampihetseham-batana, manamarika ary mifidiana izay tianao.
1 Mihorohoro ny proteinina namboarina
1.1 Mahafaty banana
1.2 Walnut malama
1.3 Ahintsana atody
2 Rahoviana no hisotro ny proteinina
Mihorohoro ny proteinina namboarina
Ireny proteinina namboarina namboarina, miaraka amin'ny sakafo voajanahary sy mahasalama, dia tonga lafatra amin'ny famaritana ny hozatrao. Salama, salama ary zava-dehibe indrindra, matsiro izy ireo. Andramo ireto recette ireto ary safidio ny tianao indrindra, ho tianao izy ireo.
Ny akondro no sakafo ankafizin'ny atleta, satria loharano voajanahary amin'ny siramamy sy siramamy voajanahary izay manampy anao hamerina ny vatanao aorian'ny fanazaran-tena. Mba hanomanana fikolokoloana proteinina akondro ilainao.
Antsasaky ny litatra ny ronono
5 atody nandrahoina, izay hampiasanao ireo fotsy 5 ary yolks 2 fotsiny
Sotro fihinana 2 malalaka an'ny oats
Ny fanomanana dia tena tsotra, tsy maintsy apetrakao ao anaty blender fotsiny ny akora rehetra ary afangaro tsara mandra-pahazoanao ny endriny tianao indrindra. Azonao atao ny mangatsiaka amin'ny ranomandry, style smoothie, na amin'ny hafanan'ny efitrano. Aorian'ny fikolokoloana mafy dia hanampy anao ho sitrana haingana kokoa izany.
Ny voanjo dia sakafo feno tombony ara-pahasalamana, noho izy ireo manankarena amin'ny asidra matavy Omega3. ihany koa loharanom-pahalalana proteinina voajanahary izy ireo, noho izany dia mety tsy hita ao amin'ny lisitr'ireo horohoron-tany natao hofaritana izany. Ireo no akora ilaina ilainao hanomanana an'io savony vita amin'ny rongony io.
300 ml an'ny ronono
yaourt grika tsiro voajanahary tsy misy siramamy
andiana iray voanjo
antsasaky ny vera Agua
ny fotsy atody 3 nandrahoina teo aloha
Afangaro ao anaty vera blender ireo akora rehetra mandra-pahazoanao fikosoham-bolo tsara sy malefaka miaraka amin'ny endrika tianao indrindra. Raha ilainao izany, afaka manampy ronono na rano bebe kokoa ianao mba hanamaivana ny fikororohana. Manampia gilasy kely ary manana fisotroana aorian'ny fampihetseham-batana mamelombelona sy mahavelona.
Manankarena proteinina ny atody ary noho izany dia tsy banga amin'ny sakafon'izay te hampitombo ny hozatra izany. Ho fanampin'ny maha sakafo mahasalama feno otrikaina tena ilaina, azo raisina amin'ny fomba maro isan-karazany izy io, ao anatin'izany ny fisotroana matsiro toa ity proteinina ity. Mariho ireo fangaro.
Fotsy atody 3 na Fotsy atody pasteur 90 grama
litatra iray an'ny ronono
3 sotro fihinanana oats
Afangaroy ny fangaro rehetra mandra-pahazoanao malama miaraka amin'ny tsy fitoviana tianao indrindra. Raha be loatra ny ranoka dia azonao atao ny manisy oatmeal iray sotro, ary raha matevina loatra dia rano kely. Sotroina mangatsiaka rehefa avy niasa na alohan'ny fivoahana amin'ny fanazaran-tena amin'ny maraina, satria izy io dia loharano angovo tonga lafatra ihany koa ho an'ny fanatanjahan-tena.
Rahoviana no hisotro ny proteinina
Ny fihovan'ny proteinina dia tokony horaisina alohan'izay na aorian'ny fampihetseham-batana, satria io fomba io dia mamelombelona tsara ny proteinina ny vatana. Raha manana proteinina iray monja isan'andro ianao, ny zavatra tsara indrindra tokony hataonao dia ny manao azy eo amin'ny 30 minitra aorian'ny fanaovana ny fampiofanana anao. Raha te hanozongozona proteinina roa namboarina isan'andro ianao dia mety raha manana iray ho an'ny sakafo maraina.
Amin'izany fomba izany, ny vatanao dia afaka manararaotra ny tombony be indrindra amin'ny proteinina amin'ny asa atao isan'andro. Na ahoana na ahoana, tsarovy izany ilaina ny miaraka amin'ny proteinina amin'ny fanatanjahan-tena. Raha tsy izany dia mety hivadika tavy izy io ary hahatonga anao hitombo lanja. Ampiasao tsara ny loharanon-karena voajanahary ary miaraka amin'ny ezaka ataonao dia hahazo ilay vatana tadiavinao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » fanatanjahan-tena » Akorandriaka proteinina 3 namboarina hofaritana